China Steel Prop ifektri nabaphakeli |I-Lianggong
I-steel prop iyisisetshenziswa esisekelayo esisetshenziswa kakhulu ukusekela ukwakheka kwesikhombisi-ndlela esime mpo, esivumelana nokusekela okuqondile kwe-slab formwork yanoma yimuphi umumo.Kulula futhi kuyavumelana nezimo, futhi ukufakwa kulula, ukonga futhi kuyasebenziseka.Ipropu yensimbi ithatha indawo encane futhi kulula ukuyigcina nokuyihambisa.
I-steel prop iyisisetshenziswa esisekelayo esisetshenziswa kakhulu ukusekela ukwakheka kwesikhombisi-ndlela esime mpo, esijwayela ukusekelwa okuqondile kwe-slab formwork yanoma isiphi isimo.Ilula futhi iyavumelana nezimo, futhi ukufakwa kuyafaneleka, ngokonga futhi kuyasebenziseka.Ingxenye yensimbi ithatha indawo encane futhi kulula ukuyigcina nokuthutha.
Ipropu yensimbi iyalungiseka phakathi kwebanga elithile futhi ingalungiswa njengoba kudingeka.
Kunezinhlobo ezintathu ikakhulukazi zezinsiza zensimbi :
1.Ishubhu yangaphandleφ60,Ithubhu yangaphakathiφ48(60/48)
2.Ishubhu yangaphandleφ75,Ithubhu yangaphakathiφ60(75/60)
Ipropu yasekuqaleni yensimbi yaba isiteji sokuqala esilungisekayo emhlabeni, esishintsha ukwakhiwa.Iwumklamo olula nomusha, okhiqizwe kusukela kunsimbi ekhiqiza kakhulu ukuya ekucacisweni kwe-steel prop, ovumela ukwenza izinto ezihlukahlukene kuzo zonke izinto eziningi ezisetshenziswayo, okuhlanganisa ukusekela kokuqamba amanga, njengamabhilidi ogu, kanye nosekelo lwesikhashana.Ama-prop ensimbi ayashesha ukusukuma ngezinyathelo ezintathu ezilula futhi angaphathwa umuntu oyedwa, ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi wesakhiwo othembekile nowongayo kanye nezinhlelo zokusebenza zesikafula.
Izingxenye ze-steel prop:
1. Ikhanda ne-base plate ukuze kuvikelwe imishayo yamapulangwe noma ukusiza ukusetshenziswa kwezisekeli.
2. Ububanzi beshubhu elingaphakathi lenza amashubhu esikafula ajwayelekile kanye namabhangqa ukuze asetshenziselwe izinjongo zokuhlanganisa.
3. Ishubhu yangaphandle ithatha ingxenye yentambo kanye ne-slot yokulungisa ubude obuhle.Ama-couplers anciphisa anika amandla amashubhu esikafula ajwayelekile ukuthi axhunywe ku-prop yangaphandle yeshubhu yensimbi ngezinjongo zokuhlanganisa.
4. Intambo eshubhu yangaphandle ihlinzeka ngokulungiswa okuhle ngaphakathi kobubanzi obunikeziwe.Intambo egoqiwe igcina ukushuba kodonga lweshubhu futhi ngaleyo ndlela igcine amandla aphezulu.
5. Inathi lepropu iyinadi leprop lensimbi elizihlanzayo elinembobo ekugcineni ukuze lijike kalula uma isibambo sepropu siseduze nezindonga.I-nati elengeziwe lingengezwa ukuze kuguqulwe i-prop ibe i-push-pull strut.
1. Amashubhu ensimbi ekhwalithi ephezulu aqinisekisa umthamo wawo wokulayisha ophezulu.
2. Ukuqedela okuhlukahlukene kuyatholakala, okufana nalokhu: i-galvanization ecwilisiwe eshisayo, i-electric-galvanization, i-powder coating kanye nokudweba.
3. Umklamo okhethekile uvimbela opharetha ukuba angalimazi izandla zakhe phakathi kweshubhu yangaphakathi nangaphandle.
4. Ishubhu yangaphakathi, iphinikhodi kanye namantongomane alungisekayo aklanyelwe ukuvikelwa ekukhishweni okungahlosiwe.
5. Ngosayizi ofanayo wepuleti ne-base plate, amakhanda e-prop (amakhanda emfoloko) afakwa kalula eshubhuni elingaphakathi nangaphandle.
6. Ama-pallets aqinile aqinisekisa ukuthutha kalula futhi ngokuphepha.
Okwedlule: Ifektri yamahhala yesampula yokuqasha isikafula - I-Ringlock scaffolding – Lianggong
Olandelayo: Plastic Slab Formwork